ary nanao tombana ny fanampiana maika tokony hatao, dia tonga tany Mahanoro nitarika ny iraky ny fanjakana nitondra fanampiana ny minisitry ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary fampivoarana ny vehivavy, Naharimamy Lucien Irmah. Vary, voamaina, ronono sy kojakoja maro samihafa no nozaraina tamin’ireo fianakaviana traboina. Miara-misalahy amin’izao fanampiana ny mpiara-belona izao ny avy ao amin’ny minisiteran’ny fiarovam-pirenena sy ny BNGRC. Anisan’ny distrika niharan’ny fiakaran’ny rano vokatry ny andro ratsy Francisco farany teo ny distrikan’i Mahanoro, Faritra Atsinanana. Tokantrano maro no mbola miaina ao anaty rano amin’izao fotoana izao. Nihazo an’Amparafaravola Faritra Alaotra Mangoro indray izy sy ireo delegasiona miaraka aminy omaly. Namela takaitra tamin’ny fotodrafitrasa sy traboina an’arivony tao amin’ity distrika ity ny andro ratsy nitondra rotsak’orana betsaka tamin’ny faramparan’ny volana janoary 2020 iny.